भैंसी गोठ सामूहिक हत्याकाण्डमा उठेको प्रश्न: घरमा सुतेकाहरू गोठमा कसरी पुगे?
मृतक माधव दम्पती बस्ने घर (बायाँ) र घटनास्थल दायाँ
रुपन्देहीको तिलोत्तमा १० मैनहवास्थित गंगादेवी भैंसी फार्ममा भएको सामूहिक हत्याको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ।
२७ जेठ बिहान ५ बजे उक्त फार्मका सञ्चालक कृष्णबहादुर पुन सधै झैं आफ्नो भैंसी फार्ममा पुगे । गेट बन्द देखेपछि उनले पालैपालो माधव मुसहर र उनकी श्रीमती जानकीलाई बोलाए । माधवको परिवार गेट नजिकैको घरमा बस्थ्यो।
कृष्णबहादुरका अनुसार उक्त घर नै जानकी र माधवको परिवारका लागि बनाइएको थियो । जहाँ श्रीमान, श्रीमती र उनका छोरा अर्जुन सुत्थे।
फार्मका अर्का सञ्चालक रामबहादुर पुनका अनुसार माधव र उनकी श्रीमती पाँच वर्षदेखि त्यहाँ कार्यरत छन् । माधवको घर रुपन्देहीको सैनामैना हो भने मैनहवा ससुराली गाउँ हो।
पहिले उक्त ठाउँमा कृष्णबहादुरका दाजुले कुखुरा पालन गरेका थिए भने माधव र जानकी पनि दुवै कुखुरा फार्ममा काम गर्थे।
तर, कुखुराबाट घाटा भएपछि कृष्णका दाजुले व्यवसाय छोडेर विदेश गए । त्यसपछि कृष्ण र रामबहादुर पुनले उक्त फार्ममा दुई वर्षदेखि भैंसी पालन गरिरहेका छन्।
मृतक जानकी मुसहरकी बहिनी गोलारी मुसहर पनि दिदीको घरमा राति सुत्न आउँथिन्।
गोलारीको घर वार्ड नम्बर १० को कान्छीबजार नजिक जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पशुफार्मका अर्का सञ्चालक रामबहादुर पुनका अनुसार घरमा सुत्ने ठाउँको अभाव भएपछि बहिनी दिदीकहाँ सुत्न आउने गरेकी थिइन् । र, हिजो पनि गोलारी त्यहीं आएकी थिइन्।
गोलारीका अनुसार हिजो साँझ खाना खाएपछि जानकीका कान्छा छोरा अर्जुन मुसहर (१०) र गोलारी एउटा कोठामा सुते भने जानकी र माधव अर्को कोठामा सुतेका थिए।
तर, बिहान माधव र जानकीको शव गोठको दक्षिणतर्फको भागमा अन्य तीन मृतकसँगै भेटियो । घरमा सुत्ने उनीहरू कसरी गोठमा सुत्न आइपुगे ? घटनाको अनुसन्धान यहींबाट शुरु हुनसक्छ।
मृतकका छोरा अर्जुनका अनुसार राति उनीहरू सुतेको कोठामा कसैले ढकढक्याएको थियो । तर, डरले उनीहरूले ढोका खोलेनन्।
“घरमा सुत्ने उनीहरू कसरी यता आए, मलाई पनि अचम्म लागेको छ, अनुसन्धानबाट पुष्टि होला,” कृष्णबहादुर पुनले भने।
घटनास्थलमा पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार चार जनाको शव लहरै सुतेकै अवस्थामा थियो भने जानकीको शव माधव भन्दा थोरै टाढा थियो । “घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सुतेकै ठाउँमा मारेको देखिन्छ, तर घरमा सुतेकाहरू गोठमा कसरी आए भन्ने अनुसन्धानको विषय हो,” ती अधिकृतले भने।
उक्त घटनामा माधव मुसहर र जानकी मुसहरसँगै १४ वर्षीय पोषराज मुसहर, १७ वर्षीय करन चौधरी र १७ वर्षीय आशीष चौधरी गरी पाँच जना मारिएका छन्।
करन र आशीष पोषराजका साथी हुन् । उनीहरू बेलाबेलामा गोठमा गएर रमाइलो गरिरहन्थे । पोषराज तिलोत्तमा १० कान्छीबजारस्थित जनहित माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए । अनाथ पोषराजलाई कृष्णबहादुले ८ वर्षदेखि सँगै राखेका थिए भने करन कान्छीबजार नजिकै अर्को पशुफार्ममा काम गर्थे।
उक्त हत्यामा संलग्न भनिएका झसेन्द्र सिंजाली कृष्णबहादुर पुनको पशुफार्ममा काम गर्न आएको डेढ महीना मात्र भएको छ । त्यसअघि उनी शिवपुरस्थित अर्को एउटा पशुफार्ममा काम गर्थे।
श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएर श्रीमतीले छोडेकाे झसेन्द्रले कृष्णबहादुरसँग बताएका थिए । झसेन्द्र पशुफार्मदेखि एक सय मिटर दक्षिणमा रहेको कृष्णबहादुरको घरमा खाना खान्थे।
सोमबार पनि उनी खाना खाएर राति ९ बजे पशुफार्ममा फर्किएका थिए । “खाना खान जाँदा ठीकै थियो, केही समस्या पाएनौं,” कृष्णबहादुर भन्छन्।
मैनहवाका एक स्थानीयका अनुसार पशुफार्ममा काम गर्ने अन्यले आफूलाई जिस्काएर एक्लाे पार्ने गरेको गुनासो कहिलेकाहीं झसेन्द्रले गर्ने गरेका थिए।
मृतकका जेठा छोरा करण मुसहर भने झसेन्द्र र आफ्ना बाबुको सधैं झगडा परिरहने र झसेन्द्रले मार्छु भन्ने गरेको बताउँछन् । तर, पशुफार्मका सञ्चालक कृष्णबहादुर पुन भने झसेन्द्र सीधा र कसैसँग झगडा गर्ने स्वभावको नभएको बताउँछन्।